DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA A4TECH BLOODY V8 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
A4Tech Bloody V8 Mouse Driver Download
Ọ bụ ezie na draịvụl na ihe oyiyi disk na-esiwanye ike na ndụ nke oge a, ọtụtụ ndị ọrụ ka na-eji ike nkịtị eme ihe maka ịge egwu na ikiri ihe nkiri. A na-ahụkarị diski na-ewu ewu maka ịnyefe ozi n'etiti kọmputa.
Ihe a na-akpọ "ọkụ site na" disks na-eme site na mmemme pụrụ iche, nke dị na netwọk a nnukwu nọmba - ma ugwo na free. Otú ọ dị, iji nweta nsonaazụ kachasị elu, ị ga-eji naanị ngwaahịa a nwalere oge. Nero - usoro ihe omume na ihe ọ bụla onye ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ na diski ahụ maara banyere. Ọ nwere ike ide ozi ọ bụla na diski ọ bụla n'oge na-adịghị anya, nke a pụrụ ịdabere na ya n'enweghị njehie.
Wepu ihe ọhụrụ nke Nero
Isiokwu a ga-atụle arụmọrụ nke usoro ihe omume ahụ dịka ịdekọ ozi dị iche iche na diski.
1. Nke mbụ, a ghaghị ibudata ihe omume ahụ na kọmputa. Site na saịtị ọrụ ahụ mgbe ị banyere adreesị ozi-e gị, ana ebudata nbudata Ịntanetị.
2. Nbudata a ebudatara mgbe mwepụta ahụ ga-amalite ntinye nke usoro ihe omume ahụ. Nke a ga-achọ ka eji ọsọ Ịntanet na ngwa ngwa kọmputa, nke nwere ike ime ka ọrụ dị otu oge ghara iru ala. Debe oge iji kọmputa mee oge ma chere maka usoro zuru ezu nke usoro ihe omume ahụ.
3. Mgbe emechara Nero, a ghaghị ịmepụta ihe omume ahụ. Mgbe emepechara, menu ihe omume ahụ na-egosi n'ihu anyị, site na nke a na-ahọpụta ihe ndị dị mkpa maka iji rụọ ọrụ na disk.
4. Dabere na data dị mkpa ka edere ya na diski, a choro nchịkọta achọrọ. Chee echiche banyere onye na-ahụ maka ntinye ederede na ụdị diski dị iche iche - Nero Burning ROM. Iji mee nke a, pịa ebe kwesịrị ekwesị ma chere maka oghere.
5. Na menu ndapụta, họrọ ụdị a chọrọ nke diski - CD, DVD ma ọ bụ Blu-ray.
6. Na kọlụm aka ekpe ị chọrọ ịhọrọ ụdị ọrụ ịchọrọ ịdekọ, na nri anyị debere njedebe maka ndekọ na diski e dere. Push bọtịnụ Ọhụrụ imeghe menu ndekọ.
7. Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ faịlụ dị mkpa ka edere ya na diski. Ụdị ha agaghị agafe ohere ohere na diski, ma ọ bụghị ndekọ ahụ ga-ada ma merie disk ahụ. Iji mee nke a, họta faịlụ dị mkpa n'akụkụ aka nri nke window ma dọrọ ha gaa n'akụkụ aka ekpe - maka ndekọ.
Ogwe ahụ dị na ala nke usoro ihe omume ahụ ga-egosi njupụta nke diski ahụ, dabere na faịlụ ndị ahọrọ na ọnụ ọgụgụ ncheta nke usoro mgbasa ozi.
8. Mgbe nhọta faịlụ a dechara, pịa bọtịnụ ahụ Ọkụ ọkụ. Usoro ihe omume ahụ ga-agwa gị ka ị tinye ihe efu efu, emesia ndekọ nke faịlụ ndị ahọrọ ga-amalite.
9. Mgbe njedebe nke diski diski, anyị na-enweta diski nke ọma ederede nke a pụrụ iji ozugbo.
Nero na-enye ike iji ngwa ngwa dee faịlụ ọ bụla na mgbasaozi anụ ahụ. Mfe iji, ma inwe nnukwu ọrụ - onye na-enweghị onye ọ bụla na-arụ ọrụ na disk.